Arsenal oo ku sii dhawaanaysa saxiixa daafaca Lille ee Djibril Sidibe – Gool FM
(London) 07 Luulyo 2016 Kooxda Arsenal ayaa ku sii dhawaanaysa saxiixa daafaca kooxda Lille ee Djibril Sidibe kaas oo qarka u saarnaa maalmo ka hor inuu ku biiro kooxda AS Monaco.
L’Equipe ayaa shaaca ka qaaday in Arsenal ay hor istaagtay saxiixii Djibril Sidibe uu ugu biiri lahaa Monaco saacadihii ugu danbeeyay kadib markii ay xiriir la sameeyeen laacibka.
Labada kooxood ayaa haatan sugaya jawaabta kama danbaysta ah ee laacibka taas oo ku aadan kooxda uu dooran doono inuu u ciyaaro xiliciyaareedka soo socda, waxaana lagu heli karaa 15 milyan oo euro.
Djibril Sidibe oo ku jira liiska ciyaartoyda uu diyaar garowga galiyay tababaraha xulka Faransiiska koobka euro 2016 ayaa ah daafac ka ciyaari kara intabadan qaybaha kala duwan ee difaaca taas oo si wayn u soo jiidatay tababare Arsene Wenger.
23 jirka reer France ayaa qaab ciyaareed fiican ku soo bandhigay kooxda Lille xiliciyaareedkii dhamaaday, Wenger ayaana ka dhiganaya bartilmaameedkiisa koowaad ee dhanka difaaca suuqa kala iibsiga ee xaggaagan.
RASMI: Goolhayihii hore ee Barcelona iyo Man United Victor Valdes oo ku biiray Middlesbrough